Sidee Bay Odayaasha ugu Adeegaan Kiniisadaha Markhaatiyaasha Yehowah?
Sidee Bay Odayaasha ugu Adeegaan Kiniisadda?
Ururkeenna kuma jiraan wadaaddo lacag la siiyo. Laakiinse waxaa la xil saaraa hoggaamiyayaal aqoon leh siday u ilaaliyaan oo ‘daaqiyaan kiniisadda Ilaah.’ (Falimaha Rasuullada 20:28) Sidaas baa la sameyn jiray waayihii hore ay kiniisadaha Kirishtaanka ah bilaabmeen. Odayaashan waa niman Ilaahay xiriir weyn la leh oo hoggaamiya kiniisadda. Idaha Ilaah bay ilaaliyaan iyagoo ‘aan qasab ahaan u dhawrayn, laakiinse raalli ka ah sida Ilaah doonayo. Oo weliba u dhawrin faaʼiido ceeb ah daraaddeed, laakiinse ku dhawra maan diyaar ah.’ (1 Butros 5:1-3) Hawshee bay aawadeen u qabtaan?
Way ina daneeyaan wayna ina dhawraan. Odayaasha kuwa kiniisadda ku jira tilmaan bay Kitaabka ka siiyaan. Waxayna ku caawiyaan inay xajiyaan xiriirkay Ilaahay la leeyihiin. Wayna ka warqabaan inuu Ilaahay ku aamminay hawshan muhimka ah sidaas darteed dadkiisa ma cadaadiyaan. Laakiinse waxay ka shaqeeyaan wanaaggeenna iyo farxaddeenna. (2 Korintos 1:24) Siduu adhijirku mid walba oo idihiisa ka mid ah uga taxaddaro bay odayaashuna ugu dadaalaan inay bartaan mid walba oo kiniisadda ka mid ah.—Maahmaahyadii 27:23.
Waxay ina baraan doonista Ilaahay sida loo sameeyo. Asbuuc kasta odayaasha waxay daryeelaan kulammada kiniisadda siday iimaankeenna u xoojiyaan. (Falimaha Rasuullada 15:32) Nimankan dadaalka badan hawsha wacdiga bay hoggaamiyaan iyagoo inala shaqeynaya oo inagu tababbaraya dhan kastoo wacdiga.
Shakhsi ahaan bay inoo dhiirrigeliyaan. Odayaasha gurigeenna bay inagu soo booqdaan ama Hoolka Boqortooyada dhexdiisa siday inoogu caawiyaan inaan xoojino xiriirkaan Ilaahay la leenahay. Markay ina soo booqdaan Qorniinka Quduuska ah bay inaga siiyaan gargaar iyo qalbi qaboojis.—Yacquub 5:14, 15.
Hawsha kiniisadda ka sokow odayaasha intooda badan way shaqeeyaan waxaana saaraan xilka xaaskooda. Waa inay waxyaalahan waqti siiyaan. Nimankan dadaalka badan waxay istaahilaan inaan ixtiraamno.—1 Tesaloniika 5:12, 13.
Maxay tahay hawsha odayaasha?
Sidee bay odayaasha shakhsi ahaan inoo daneeyaan?
Yaa u qalmo adeegidda? Ka akhri shardiyada Kitaabiga ah oo ku saabsan odayaasha iyo caawiyayaasha kiniisadda 1 Timoteyos 3:1-10, 12 iyo Tiitos 1:5-9.
Wadaag Wadaag Sidee Bay Odayaasha ugu Adeegaan Kiniisadda?